मनोरञ्जन – rastriyakhabar.com
काठमाडौँ । बलिउडका सेलिब्रेटीहरू आफ्नो व्यावसायिक कामबाहेक बिलासी जीवन बिताउन उतिकै चर्चित छन् । उनीहरू लक्जरी गाडीमा सवार हुन मन पराउँछन् । बलिउडका केही कलाकारसँग त बुलेटप्रुफ गाडी नै छ । अभिनेता आमिर खानसँग मर्सिडिज एस ६०० गार्ड नामको बुलेटप्रुफ कार छ । बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्रीमध्ये एक कंगना..
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनी माल्दिभ्समा छुटी मनाइरहेकी छन् । उनको विभिन्न पोजमा खिचिएको हट अवतारको तस्वीरहरु यतिवेला समाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । माल्दिभ्समा छुटी मनाइरहेको उनले समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्वीरबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तस्वीरअनुसार उनले अहिले निक्कै रोमान्चित..
काठमाडौँ – काठमाडौँ बाफलकी दीक्षा केसी विवाहित महिलाहरूबीचको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र सफल सौन्दर्य प्रतियोगिता वाइवाइ मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२१ को उपाधि चुम्न सफल भएकी छन्। यस्तै पब्लिक चोइस अवार्ड भने व्यवसायी लक्ष्मी जोशीले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भइन । अमेरिका बस्दै आएकी जोशी समाजसेवा तथा शिक्षण..
मुम्बई(एजेन्सी) । फिल्म विश्वमा जोडिएको र अलग्गिएको चर्चा प्रायः भइरहन्छ । कैयौं स्टारहरु यस्ता छन्, जसको प्रेम अन्य स्टारसँग एकपटक नभई कैयौंपटक हुने गर्दछ । बलिउडमा यस्ता केही अभिनेत्री छन्, जसले एकपटक मात्र नभई कैयौं पटक हेण्डसम प्रेमीसँग प्रेम गरेर उनीहरुको हृदयमा विछोडको छुरा चलाएका छन्..
फोटोशुटले जेलको यात्रा ! आखिर ती मोडलले कस्ता तस्वीर खिचाइन् ?
काठमाडौं। इजिप्टमा फोटोशुटका कारण एक मोडल र उनको फोटो खिच्ने फोटोग्राफर जेल जानुपरेको छ । यी मोडलका फोटोहरु सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएपछि इजिप्टमा बहस सृजना भएको छ । इजिप्टको मिडियाले यी मोडलका तस्वीरलाई ‘उत्तेजक र आपत्तिजनक’ भनेपछि सामाजिक संजाल विभाजित भएको छ । केहीले यी मोडल र..
सोमवार, पुस १२, २०७८ मा प्रकाशित
विवाहित महिलाका लागि आयोजना गरिँदै आएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस नेपाल वल्र्डको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २४ महिलाबीच भिडन्त हुने भएको छ । रिवन इन्टरटेनमेन्टको आयोजना तथा की एडभरटाइजिङको मार्केटिङ सहकार्यमा हुने वाईवाई मिसेस नेपाल वल्र्डको यो नयाँ संस्करणमा समाजसेवी..
‘क्याप्टेन, ऐश्वर्य’ लगायतका फिल्ममा आफ्नो निर्देशकिय कौशल प्रस्तुत गरिरहेका दीवाकर भट्टराई नयाँ फिल्ममा आबद्ध भएका छन् । क्रिसमसको अवसर पारेर उनले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ‘हनी बनी’ को घोषणा गरिएको छ । सम्पूर्ण छायांकन यूकेमा हुने फिल्मका लागि कलाकारको छनोट भने भइसकेको छैन । अडिसनबाट कलाकार..
मिसेस नेपाल वल्र्डको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा समाजसेवी तथा व्यवसायी लक्ष्मी जोशी पनि
शनिबार, पुस १०, २०७८ मा प्रकाशित
यी हुन् एडल्ट फिल्मबाट अलग्गिएका चर्चित अभिनेत्री
बिहिबार, पुस ८, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । भारतमा पोर्न फिल्ममा प्रतिबन्ध लागे पनि यहाँ पोर्न कारोबार निकै फष्टाइरहेको छ । अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा यो मामलामा पक्राउ परेर जमानतमा रिहा भइसकेका छन् । सन् २०१४ को अन्त्यमा भारत पोर्न साइट हेर्ने विश्वको पाँचौं स्थानमा थियो, जबकी अमेरिका पहिलो स्थानमा थियो । एडल्ट..
श्री देवी प्रजापति वेष्ट व्यूटीसियन अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं। दुबई र वल्र्ड वाईड मिडिया नेटवर्कको आयोजनामा दोश्रो ग्लोबल इन्टरनेशनल २०२१ अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त अवार्ड कार्यक्रममा श्री देवी प्रजापति वेष्ट व्यूटीसियन अवार्डले सम्मानित भएकी छिन् । दुबईस्थित ग्राण्ड होटलमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा सौन्दर्य एवम् व्यूटी क्षेत्रमा..
आइतवार, मंसिर १२, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारत, राजस्थानको गहलोत सरकारका राज्यमन्त्री राजेन्द्र गुढाले अनौठो बयान दिएपछि विवादमा तानिएका छन् । उनले अभिनेत्री कैट्रिना कैफको गाला जस्तै सडक बनाउने बयान दिएपछि विवादमा तानिएका हुन् । गुढा राज्यमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक आफ्नो विधानसभा क्षेत्रमा आएका थिए । पाँख गाउँमा भएको स्वागत..
मेनुका सिवाकोटी “सौन्दर्य अवार्ड बाट सम्मानित
काठमाडौँ । स्टार इन्टरनेशनल नेपालको बिशेष कार्यक्रमको अबसरमा रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल द्वारा ओम शान्ति ब्युटी क्लिनिक एंड ट्रेनिङ सेन्टरका प्रोपाइटर मेनुका सिवाकोटी “सौन्दर्य अवार्ड बाट सम्मानित हुनुभएको छ । बिगत २० बर्षदेखि सौन्दर्य क्षेत्र मार्फत मुलुकलाई सेवा पुर्याउदै आएको तथा..
मङ्लबार, कार्तिक १६, २०७८ मा प्रकाशित
बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सोमबार ४८ वर्ष पूरा भएकी छन् । १ नोभेम्बर १९७३ मा कर्णाटकमा जन्मिएकी ऐश्वर्या पछिल्लो समय फिल्म अभिनयमा त्यति सक्रिय भने छैनन् । मोडलिङबाट करिअर सुरु गरेकी उनलाई त्यतिबेलादेखि नै फिल्म खेल्ने अफर आएको हो । सन् १९९४ मा मिस वल्र्डको शीर्ष उपाधि जितेपछि त उनलाई..
काठमाडौ । सन्नी लियोन को अवतार फेरिएको धेरै भइसकेको छ । उनी बलिउडमा अत्यन्तै छोटो समयमा धेरै र उत्कृष्ट चलचित्र खेल्ने अभिनेत्रीको रुपमा चिनिएकी छिन् । उनले छोटो समयमा नै १६ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । १३ मे १९८१ मा भारतका केरेन मल्होत्रा​​की छोरीको रुपमा जन्मिएकी सन्नी लियोन अहिले एक..
काठमाडौ । पूर्र्व युवराज्ञी हिमानी शाहको कार्यक्रमको माहोल हेर्दा लाग्थ्यो अझैपनि नेपालमा राजतन्त्र कायम छ । उनीप्रति मुर्धन्य कलाकारले देखाएको सदासयताले त्यो अझै सम्भव छ की भन्ने अनौठो लक्षण देखाउँथ्यो । सँधै देश विदेशका भिआइपीले भरिने काठमाडौंको सोल्टी होटल शुक्रबार भने कलाकार र राजपरिवारका..